बैंकहरूले दिन थाले डलर कार्ड, कसरी लिने- कति लाग्छ शुल्क? :: कमल नेपाल :: Setopati
बैंकहरूले दिन थाले डलर कार्ड, कसरी लिने- कति लाग्छ शुल्क?
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरुले प्रिपेड डलर कार्ड प्रदान गर्न थालेका छन्।
एनएमबि, नबिल लगायत बैंकहरुले यस्तो कार्डको सुरुआत गरिसकेका छन्। अरु वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले पनि यस्तो कार्ड प्रदान गर्नेछन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ११, २०७७, ०९:५२:००